March 2022 - Mega Wave
ဗန်ဒါရွက် ဗန်ဒါသီး မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား ဆိုတဲ့စကားဟာ စကားပုံမဟုတ်ပါဘူး
Unicode ဗန်ဒါရွက် ဗန်ဒါသီး မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား ဆိုတဲ့စကားဟာ စကားပုံမဟုတ်ပါဘူး ဒီ နေ့ မိ သား စု တို့ ကို ပြော ပြ ချင် တဲ့ဆေး နည်း က
သဘာဝငံပြာရည် စစ်စစ် ပြုလုပ်နည်း (ဧရာဝတီတိုင်းမှာ လုပ်နေကြတဲ့ နည်းပါ)
Unicode ဧရာဝတီသားရဲ့ မိသားစု တစ်နှစ်စာနဲ့ လက်ဆောင်ပေးဖို့ သဘာဝစစ်စစ် ရေချိုငံပြာရည်လေးတွေ ဒီနေ့ စလုပ်ပါပြီ။ လုပ်နည်းလေးပါ မျှဝေပါရစေ.. ရေချို ငံပြာရည်စစ်စစ် လုပ်နည်းလေးပါ.. ငံပြာရည်လုပ်ဖို့အတွက် ငါးခေါင်း ငါးအသေးလေတွေ ငါးအကြီး ဆိုဒ်စုံ လုပ်လို့ရတယ်..
“ဆင်မာန်စွယ် ငှက်ပျောမတက်” ဆိုတဲ့အတိုင်း စမ်းသပ်ပုံ နှင့် ဆင်မာန်စွယ် အကြောင်း
Unicode “ဆင်မာန်စွယ် ငှက်ပျောမတက်” ဆိုတဲ့အတိုင်း စမ်းသပ်ပုံ နှင့် ဆင်မာန်စွယ် အကြောင်း မာန်စွယ်ဆိုသည်မှာ သာမာန်ချိုးထား/ဖြတ်ထားသော အစွယ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ ဒေါသဖြစ်၍ တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်ကျသောအချိန်တွင် ကျိုးကျန်ရစ်သော အစွယ်ကျိုးကို ခေါ်သည်။ တစ်ချို့မာန်စွယ်များသည် သစ်ပင်များတွင် စိုက်ဝင်လျှက်ရှာဖွေတွေ့ရှိရသလို တစ်ချို့မာန်စွယ်များကတော့
အသစ်ထွက်လာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေရဲ့ ဘေးနှစ်ဖက်မှာ ခြစ်ထားတဲ့ အချောင်းလေးတွေက ဘာအတွက်ခြစ်ထားလဲဆိုတာ….
Unicode အသစ်ထွက်လာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေရဲ့ ဘေးနှစ်ဖက်မှာ ခြစ်ထားတဲ့ အချောင်းလေးတွေက ဘာအတွက်ခြစ်ထားလဲဆိုတာ…. အသစ်ထွက်လာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေရဲ့ ဘေးနှစ်ဖက်မှာ ခြစ်ထားတဲ့ အချောင်းလေးတွေက ဘာအတွက်ခြစ်ထားလဲဆိုတာမသိရှိသေးသူတွေအတွက် ဗဟုသုတဖြစ်စေဖို့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အသစ်ထွက်လာတဲ့ပိုက်ဆံတွေ ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာ ခြစ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီး ခြစ်ထားတဲ့အချောင်းအရေအတွက်ကွာခြားနေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ သက်တမ်းရှိတာတောင် လုံးဝဟောင်းနွမ်းသွားခြင်းမရှိတဲ့ Goujian ဘုရင်ရဲ့ ဓား
Unicode ရှေးဟောင်းသုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ၁၉၆၅ခုနှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံHubeiပြည်နယ်ကရှေးဟောင်းသင်္ချိုင်းတစ်ခုမှာအရိုးစုဘေးရှိသစ်သားသေတ္တာအတွင်းကနေ အံဖွယ်ဓားတစ်ချောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သမိုင်းပညာရှင်များရဲ့ လေ့လာချက်အရ ဒီဓားဟာ ရှေးနှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ခန့်(ဘီစီ ၄၉၆) ဝန်းကျင်မှာ စိုးစံခဲ့တဲ့ Yue ရဲ့ ရှေးဘုရင် Goujian က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
ငါးကြီးအန်ဖက်ဟာ ဘာလို့ရွှေထက်တန်ဖိုးကြီးသလဲ… ဘာတွေအသုံးဝင်လို့လဲ…
Unicode တချို့က ငါးကြီးအန်ဖက် ကို ငါးကြီးက အန်ထုတ်တာလို့ ထင်နေကြပါတယ်။ တကယ်က အစာခြေတဲ့ စနစ်ကနေ စွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ ပျော့ချွဲချွဲအရာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို အလွယ်အားဖြင့် ငါးကြီးအန်ဖက် လို့ ခေါ်ကြတာပါ။ တကယ်က ချေးအဆင့်
ဆင် မုန်ယိုခြင်း (သို့) မုန်ကျခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ…(မသိသေးသူများ အတွက် ဗဟုသုတအဖြစ် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…)
Unicode ဆင်၏နထင်နေရာတွင် မုန်ပေါက်ရှိပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သော ဆင်ပေါက်များမုန်ကျလေ့ရှိပြီး အသက်ကြီး၅၅နှစ်ကျော်ထိလည်း မုန်ကျမှု‌ တွေရှိရပါသည်။ မုန်ကျခြင်း(Masth ) သည် မိတ်ယှဉ်လိုခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု တထစ်ချမှတ်ယူလို့မရပါ။ အလိုမကျ၊ ဗိုလ်မထားစိတ်ရိုင်းထကြွချိန်ဖြစ်သဖြင့်ထိန်းသိမ်းသူအပါအဝင်ဆင်မ(သို့ ) ဆင်ထီးများကိုလည်း ရန်ပြုတတ်ပါသည်။
Unicode အမေရိကန်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေက တလကို 3.5 ကြိမ်လောက်ငိုပြီး အမျိုးသားတွေက 1.9 ကြိမ်လောက်ငိုတယ်လို့ စစ်တမ်းတွေအရ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငိုခြင်းက စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာလို့ လူအများစုက ယူဆကြပါတယ်။ တကယ်လို့ ငိုချင်လာရင် မျက်ရည်တွေကို
ကွယ်လွန်မယ့်နေ့ကို ကြိုသိတဲ့ ဗေဒင်တွက်နည်း (သမိုင်းထဲက ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ် အဖြစ်အပျက်)
Unicode သာလွန်မင်းသည် ညောင်ရမ်းခေတ်တွင် အလွန်ထင်ရှားသော မင်းတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘွဲ့အမည် သိရီသုဓမ္မ ရာဇာ မဟာဓိပတိဖြစ်သော်လည်း သူ၏လက်ထက်တွင် တိုင်းပြည်အလွန်သာယာလှသောကြောင့် သာလွန်မင်း ဟုသာ အမည်တွင်သည်။ ဒီအကြောင်းကို တွင်းသင်းမဟာရာဇဝင်သစ် တွင် ‘ညီတော် မင်းတရားမှာ တိုင်းကားပြည်ရွာ